भोलि मङ्सिर १० गते शुक्रबार, आकस्मिक धनलाभ हुने योग, शुभ फलदायी रहला दिन? हेर्नुहोस राशिफल!
मङि्सर ०९, २०७८ SLP
यसदिन सामाजिक रूपबाट प्रसिद्धि बढ्ने सम्भावना छ। व्यापारमा लाभ हुनेछ। मध्यान्हपछि तपाईको स्वस्थ बिग्रिन सक्नेछ। परिवारको सदस्यसंग राम्रो व्यवहार गर्नुहोस नत्र विवाद उत्पन्न हुनेछ।
यसदिन तपाई कुनै पनि प्रकारको मानसिक बोझबाट स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। शारीरिक रूपबाट पनि तपाईको स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । पारिवारिक जीवनमासुख -शान्ति छाउनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईको प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ।
यसदिन प्रतिस्पर्धी र आफूभन्दा ठुला मानिससंग बहस नगर्नुहोस। व्यवसायिक क्षेत्रमा राम्रो वातावरण रहनेछ । मानसिक रुपबाट तपाई स्वस्थ रहनुहुनेछ । मध्यान्हपछि शारीरिक र मानसिक स्थितिमा अनुकूल परिवर्तन हुनेछ। धन प्राप्तिको लागि यसदिन राम्रो योग रहेको छ।
यसदिन तपाई अनैतिक कार्य र निषेधात्मक विचारबाट टाढा रहनुहोस्। पारिवारिक झगडाले तपाईलाई शारीरिक र मानसिक रुपबाट सताउनेछ। मध्यान्हपछि विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ।
स्वास्थ्यको दृष्टिबाट तपाई यसदिन प्रसन्न र आनन्दित रहनुहुनेछ। साथीहरुसंग घुमफिरमा समत बित्नेछ। सामाजिक रूपबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ । मध्यान्हपछि तपाई मानसिक रूपबाट शिथिलताको अनुभव गर्नुहुनेछ ।
यसदिन तपाई तपाई आफ्नो स्वभावमा केहि संवेदनशीलता रहनुहुनेछ । कार्य सफलता हुदा मानसिक रुपबाट प्रफुल्लित रहनुहुनेछ। तपाईले शुभ समाचार प्राप्त गर्नुहुनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपबाट तपाई प्रसन्नताको अनुभव गर्नुहुनेछ। पारिवारिक सुख-शान्ति बनिरहनेछ।
तपाई आफ्नो बौद्धिक शक्तिबाट लेखन र अन्य रचनात्मक कार्यमा अगाडी बढ्नुहुनेछ। आकस्मिक खर्चको योग रहेको छ। मध्यान्हपछि कार्य सफलता प्राप्त हुदा तपाई मानसिक रूपबाट प्रसन्न रहनुहुनेछ। पारिवारिक वातावरण आनन्दपूर्ण रहनेछ।
यसदिन विद्यार्थीको लागि अनुकुल समय रहेको छ। यदि तपाइ आफ्नो जिद्दीपन छोडेर अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै समस्याहरू समाधान हुनेछ। यसदिन नया कार्यको सुरुवात नगर्दा राम्रो हुनेछ।
यसदिन शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। साथीहरु र आफन्तसंग आनन्दपुर्वक समय बित्नेछ। मध्यान्हपछि तपाई शारीरिक र मानसिक रुपबाट चिन्तित महसुस गर्नुहुनेछ।
यसदिन तपाई वादविवादबाट टाढा रहनुहोस। धार्मिक कार्यमा खर्च हुनेछ । परिवारसंग संयम भएर कुरा गर्नुहोस। मध्यान्हपछि तपाईको दिन राम्रो रहनेछ। शारीरिक रूपबाट पनि स्वस्थ रहनुहुनेछ। भाग्य वृद्धिको योग छ।
यसदिन तपाईको झुकाव सांसारिक विषय भन्दा आध्यात्मिक विषयमा बढी हुनेछ। कुनै पनि नकरात्मक भावनालाई महत्व नदिनुहोस। शारीरिक प्रफुल्लता र मानसिक प्रसन्नता दिनभर बनिरहनेछ। धन लाभ हुने सम्भावना रहेको छ।
यसदिन धन लिने र दिने मामिलामा सावधान रहनुहोस । कसैको कार्यमा बाधा नपुर्‍याउनुहोस् । तपाई आफ्नो बोलिलाई संयम राख्नुहोस्। मध्यान्हपछि शारीरिक र मानसिक स्वाय्थ्यमा सुधार हुनेछ। पारिवारिक वातावरण आनन्दमयी रहनेछ।
प्रकाशित : बिहिबार, मङि्सर ०९, २०७८१७:२७
आज मङ्सिर १० गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल !